Bayavutha onogada abaphelelwe inkontileka kamasipala | News24
Bayavutha onogada abaphelelwe inkontileka kamasipala
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaKungesikhathi kunombhikisho wonogada ngaphandle kwaseCity Hall ngoLwesine.
ONOGADA bezindawo zakamasipala bathi angeke baze bakuthole ukuthula bengakachazelwa ukuthi kungani kuncishiswe isibalo sabo ngoba sekungene inkampani entsha yonogada.
Labo nogada bavuke umbhejazane ngesonto eledlule kusuka ngoLwesithathu noLwesine baphazamisa ukusebenza ezindaweni zikamasipala njengoba kade bexosha labo akade besebenza ngenkani.
Laba basebenzi akade besebenza ngaphansi kukaKhuselani Security Services (KSA) bathi inkinga iqale ngomhlaka 1 kuNhlangulana (June) ngesikhathi kungena inkampani entsha uRoyal Security Services.
Bathi ngesikhathi kuzongena inkampani entsha umasipala wabatshela ukuthi akekho umuntu ozolahlekelwa umsebenzi ngoba kushintsha inkampani.
“Into esixakayo maje ukuthi ebantwini abangu-700 akade begada izindawo zakamasipala sesitshelwa ukuthi kuzosebenza abantu abangu-380 kuphela nabo labo bazoncishiselwa izikhathi zokusebenza. Laba abanye bona kuthiwa abenze njani ngoba phela kusho ukuthi sebephelelwe umsebenzi?
“Uma ngabe sithi siyobuza kubaphathi ngaphakathi kamasipala ukuthi kwenzakalani basitshela ukuthi bona abazi lutho. Bathi bebengazi nanokuthi sekukhona inkampani entsha yonogada babezitshela ukuthi kushintshwe umfaniswano.
“Ukusenza izilima kwakona loko ukuthi bathi abazi lutho ekubeni kuyibona abakhiphe ithenda banikeza inkampani entsha,” kubeka omunye wonogada ongathanga ukuba adalulwe igama.
Bathi bathe uma ngabe beyobuza inkampani entsha uRoyal Security batshelwa ukuthi umasipala uthe akuthathwe onogada abangu-380 kuphela ngoba angeke uze usakwazi ukubakhokhela bonke. Baphinde batshelwa ukuthi kunezindawo zikamasipala akade bezigada kodwa manje sekuthiwa azivele ohlwini lwezindawo zikamasipala.
“Ngeke sigade indawo isikhathi esingaphezu kweminyaka eyisikhombisa bese basitshele ukuthi indawo ayiveli endaweni yabo.
“Njengoba bethi abazi ukuthi kunenkampani entsha sifuna baphenye ke ukuthi ingene kanjani nanokuthi kungani sekuncishiswa isibalo sonogada,” kubeka omunye unogada.
Labonogada bathi ithimba elibamele lizamile ukuba nezingxoxo nomasipala ukuzama ukulungisa isimo kodwa konke akuzange kuphumelele njengoba umasipala ungazange uvume ukuba nomhlangano nabo.
“Sikhathele ukwenziwa izilima manje ngoba phela manje sebedlala inkombankombane omunye uthi akazi ukhona omunye nomunye futhi ngokunjalo. Uma kungukuthi abayilungisi lento kukhulu kuyeza. Lesi kusayisiqalo nje kuphela kuningi esibaphathele kona bayoze basilalele.
“Bayakhohlwa ukuthi thina sazi izinto ezenzeka la ngaphakathi uma ngabe bengasilaleli bazobe sebeyasiphusha ukuba sikhuluma sikhiphe konke.”
Ibamba lokhulumela umasipala uMsunduzi uNkk Ntobeko Ngcobo ukhiphe isitandimende nalapho kade esho khona ukuthi inkontileka akade benayo no-KSA iphelile nokube sekuphoqa ukuba baphume ezindaweni zikamasipala lezi akade bezigada. Uthe umasipala ube usuqoka iRoyal Security Services ukuba kube iyona ethatha umsebenzi ngesikhathi i-Supply Chain Management isaqhuba uhlelo lokuqoka inkampani entsha.
“Sikhathazekile ngemibiko yokuhlaselwa kwabantu abasebenzayo ezindaweni.Ukuhlaselwa kwabantu asihambisani neze nako.Imibiko yenziwe emaphoyiseni kodwa izimpendulo bezingakatholakali. Umasipala uzofaka isicelo sencwadi ephuthumayo enkantolo nezovikela noma ikuphi ukusatshiswa, ukuhlukumeza kanye nokushaywa kwabantu ezindaweni zokusebenza zikamasipala,” kufunda isitatimende.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwenkampani iRoyal Security ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.